BioShock na-aga azụ dakọtara na Xbox One | Akụkọ akụrụngwa
Akụkọ a na-abịa Xbox One, ọ bụkwa na mbata nke oge ekeresimesi, ụlọ ọrụ egwuregwu vidio na ndị na-emepụta ihe egwuregwu vidiyo na-achọ ime ka ndị ọrụ ha nwee obi ụtọ karịa mgbe ọ bụla. Yabụ, anyị ewetara gị ozi abụọ na-atọ ụtọ na ọkwa Xbox One, nke ahụ bụ Star Wars: Battlefront aghọwo n'efu maka ndị ọrụ Xbox One na EA Access, usoro BioShock dịkwa na-adabaghị adaba. Ihe niile na-egosi na ndị ọrụ Xbox One ga-eji ezigbo ekeresimesi na-egwu egwu kachasị amasị ha na ihu onyinye ekeresimesi.
Anyị na-amalite na Star Wars: isiokwu nke Battlefront, yana dịka anyị gosipụtara, ọ na-abụ n'efu maka ndị ọrụ nwere EA Access (Electronic Arts kwa afọ gafere na DLCs, onyinye na egwuregwu), ọ bụ ezie na ọ bụ naanị maka ndị ọrụ Xbox One. Star Wars: Battlefront DLC maka Rogue One bịarutere na Disemba 6Agbanyeghị, ọhụụ a ga - ejide ọtụtụ ndị n'ọgbọ agha a gbanwere na na njedebe ụbọchị ga - abụ Star Wars ma nwee ndị ọrụ siri ike na - ejide. Dịka ị maraworị, EA Access na-efu euro 5 kwa ọnwa ma ọ bụ euro 30 kwa afọ.
Otu ihe a mere na BioShock saga, ọ dakọtara na Xbox One ugbu a, na-enye ndị ọrụ ohere zụrụ nsụgharị nke BioShock n'elu ikpo okwu Xbox Live, kpọọ egwuregwu ndị a dị egwu na-enweghị mkpa inweta ụdị Xbox One akpọ BioShock Remastered Collection, nke ga-azọpụta euro ole na ole ma anyị ka nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ndabere azụ na-eru ugbu a ihe karịrị narị atọ na utu aha, Xbox 360 egwuregwu na anyị nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-enwe na anyị Xbox One, dị ka a ga - asị na ọ bụ ụbọchị mbụ, ee, na - enweghị mmelite ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » BioShock na-agaghachi na Xbox One na ozi ọma na - akwụghị ụgwọ